အဆိုပါ LPGA Tour အပေါ်အသက်အကြီးဆုံး Winners
အဆိုပါ LPGA Tour အပေါ်ရှေးအကျဆုံး Winners များအတွက်မှတ်တမ်းများ
တစ်ဦး LPGA ပြိုင်ပွဲများတွင်ကစားရန်အသက်အကြီးဆုံးဂေါက်သီး Plus အား
အဲဒါကို "အဟောင်း" -age မှပြောပြတယ်အဖြစ်ဤတွင် LPGA Tour သမိုင်းမှတ်တမ်းအတွက်ထိပ်တန်းမှတ်တမ်းများတချို့ရှိနေပါတယ်။
အသက်အကြီးဆုံးယေဘုယျ LPGA Winners
မည်သည့် LPGA Tour ဖြစ်ရပ်အနိုင်ရအသက်အကြီးဆုံးဂေါက်သီးကားအဘယ်သူနည်း ဤတွင်ခရီးစဉ်သမိုင်းအတွက်သုံးအသက်အကြီးဆုံးဆုရရှိသူများမှာ:
ဗက်ဒံယလေသ - 46 နှစ်, 8 လ, 29 ရက် (2003 BMO Financial Group ကနေဒါအမျိုးသမီးပွင့်လင်း)
ဂျိုအန်း Carner - 46 နှစ်,5လ, 11 ရက် (1985 ခုနှစ် Safeco ဂန္ထဝင်)
Betsy ကဘုရငျ - 45 နှစ်, 10 လ, 18 ရက် (2001 ခုနှစျ LPGA Corning ဂန္ထဝင်)
အသက်အကြီးဆုံး LPGA ဗိုလ်မှူး Winners
Fay Crocker - 45 နှစ်,7လ, 11 ရက် (1960 ခုနှစ် Titleholders ချန်ပီယံရှစ်)
ရှယ်ရီ Steinhauer - 43 နှစ်,7လ, 10 ရက် (2006 အမျိုးသမီးများနေ့ဗြိတိန်ပွင့်လင်း)
သူငယ် Didrikson Zaharias - 43 နှစ်,7ရက် (1954 ခုနှစ်အမေရိကန်အမျိုးသမီးများ၏ Open)
ဇူလိုင်လ Inkster - 42 နှစ်, 13 ရက် (2002 ခုနှစ်အမေရိကန်အမျိုးသမီးများ၏ Open)
ဤရွေ့ကားသူတို့တစ်တွေအဓိကအနိုင်ရအချိန်တွင် 42 သို့မဟုတ်အထက်အသက်ခံခဲ့ရသူသာလေးဂေါက်သီးဖြစ်ကြသည်။
Inkster နှင့် Zaharias ဒဏ္ဍာရီဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, Steinhauer, ရေနစ်မြုပ်မယ့်ခန်းမစဉ်တစ်လူသိများတဲ့, Multi-အဓိကရရှိသွားခဲ့သည်။ Crocker အများကြီးလျော့နည်းလူသိများသည်။ သူမသည်အဆိုပါ LPGA Tour ၏အစောဆုံးသောကာလ၌သူမခရီးစဉ်ပူးပေါင်းအချိန်မှာသူမကိုနှောင်းပိုင်းကအသက် 30 ရှိနှင့်ပြီးသားသူတစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးကစားသမားဖြစ်ခဲ့သည်။
သို့သော် Crocker ဤမှတ်တမ်းကိုကိုင်ပြီးအပြင်, အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဘာသာဂုဏ်ထူးရှိပါတယ်: သူမအတွက် 70 ကိုချိုးဖျက်ဖို့ပထမဦးဆုံးဂေါက်သီးခဲ့ အမေရိကန်အမျိုးသမီးများ၏ Open ; အမေရိကန်အမျိုးသမီးများ၏ Open အနိုင်ရဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကစားသမား; သူမလည်းအောက်ပါစံချိန်ရရှိထားသူ ...
LPGA ရဲ့ရှေးအကျဆုံးပထမဦးစွာအချိန် Winners
အဆိုပါ LPGA Tour ပေါ်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အနိုင်ရ - အသက်အရွယ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ - ဘယ်ဟာဂေါက်သီးအရှည်ဆုံးငံ့လင့်လျက်? ဤတွင် LPGA သမိုင်းအတွက်သုံးအသက်အကြီးဆုံးပထမဦးဆုံးအချိန်ဆုရရှိသူများမှာ:
Fay Crocker - 40 နှစ်,6လ, 18 ရက် (1955 ခုနှစ် Serbin ပွင့်လင်း)
ကင်မ် Saiki - 38 နှစ်,5လ,3ရက် (2004 Wegmans Rochester LPGA)
Cindy Figg-Currier - 37 နှစ်,6လ, 8 ရက် (1997 ခုနှစ်, ပြည်နယ်လယ်ယာရထားဂန္ထဝင်)
အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း Crocker ရဲ့ချောင်းမြောင်းခွက်တဆယ်ထက်အချိန်ကိုက်နှင့်အတူလုပ်ဖို့ပိုပြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမသည်နှစ်ခုဗိုလ်ကြီးအပါအဝင် 11 ထက်ပိုသောအချိန်များ, အနိုင်ရသွားလေ၏။ သို့သော်သူမကရုံ LPGA Tour ၏ပစ်လွှတ်ပြီးနောက်နှင့်ပြီးသားသူမ၏နှောင်းပိုင်းကအသက် 30 အတွက်တလျှောက်လာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
တစ်ဦး LPGA ပြိုင်ပွဲအတွက် Play မှအသက်အကြီးဆုံးဂေါက်သီးရိုက်အားကစားသမား
ဂျိုအန်း Carner တစ်ခု LPGA Tour ဖြစ်ရပ်အတွက်ကစားရန်အသက်အကြီးဆုံးဂေါက်သီးအဖြစ်စံချိန်ရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။
43 LPGA ပြိုင်ပွဲအနိုင်ရသူကိုရေနစ်မြုပ်နေတဲ့ခန်းမ - - သူတို့ "နဲ့ Big Mama" ဟုခေါ်သောအဆိုပါဂေါက်သီး 65 နှစ်, 11 လ, သူမသည် 2005 မှာတက် teed တဲ့အခါမှာအဟောင်း 21 ရက်ခဲ့ Kraft Nabisco ချန်ပီယံရှစ် ။
Carner 79-79 သေနတ်နှင့်ဖြတ်လွဲချော်။
အဆိုပါ LPGA Tour အပေါ် Carner ၏နောက်ဆုံးအောင်ပွဲအတွက် 1985 Safeco ဂန္ထဝင်မှာနှစ်ပေါင်း 20 အစောပိုင်းကရောက်လာခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်အဖြစ်နှောင်းပိုင်းတွင် 2004 အဖြစ်သူမကခရီးစဉ်အပေါ်သူမ၏နောက်ဆုံးဖြတ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
အဆိုပါ LPGA Tour အပေါ်တစ်ဦးဖြတ်စေရန်အသက်အကြီးဆုံးဂေါက်သီး
LPGA Tour အပေါ်အငယ်ဆုံးဆုရရှိသူ
နောက်ကျောမှ LPGA Tour မှတ်တမ်း အညွှန်းကိန်း
1986 မာစတာ: Nicklaus '' နောက်ဆုံးတာဝန်ခံ
WGC Bridgestone ဖိတ်ကြားချက်ကို
LPGA Cambia လက်ပံ Classic ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲ
အဆိုပါမာစတာမှာအာနိုး Palmer က: သူ့နိုင်ပွဲများနှင့်နှစ်အလိုက်ရလဒ်များ
1934 PGA Championship ပြိုင်ပွဲ: က Short-Hitter သည့် Long-Hitter Beats
အဆိုပါကစားသမားချန်ပီယံရှစ်တစ်ဗိုလ်မှူး ဟူ. ခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံထိုက်ပါသလား?
1973 ခုနှစ်အမေရိကန်ကိုဖွင့်: 63 အကြောင်းရင်းဂျော်နီ Miller က Won
Semantic ကျဉ်းမြောင်း (အထူးပြု)
'' Christos Anesti '' အဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုပါသလား
2xxx ၏မဟာ Cascadia ငလျင်
အဆိုပါ 4-5-1 ဖွဲ့စည်းခြင်း
သင်ကဂျာမန် Learn ကူညီပါရန် 12 ထိပ်တန်းဂျာမန်ရုပ်ရှင်အကြံပြုချက်များ
ပွငျသစျထဲတွင် ___ ဆိုရမည်လုပ်နည်း
အဘယ်ကြောင့်သံမဏိ stainless လား?
တရုတ်နိုင်ငံ၏ Forbidden City,
Acrylic အဘို့အစိုဓာတ်ကို-ဆက်ပြီး palette
ကျွမ်းဘားအားကစားတစ်ခု Onodi ကဘာလဲ?
Janam Naam Sanskar (ဆစ်ခ်ကလေးငယ်များ၏အမည်များအခမ်းအနား)